Xilli firaaqaha, dhaqanka iyo nolosha jaaliyadaha | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon / Xilli firaaqaha, dhaqanka iyo nolosha jaaliyadaha
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 25 4 2019
Xilli firaaqe waxaa lagu magacaabaa wakhtiga aad fasaxa ka tahay shaqada ama iskoolka.
Wakhtiga xilli firaaqahaaga waxaad ka qayb qaadan kartaa hawlaha kala duwan ee degmada, jaaliyadaha iyo naadiyada. Iyadoo loo marayo in laga qayb galo hawlahan kala duwan waxaad ku baran kartaa dad cusub kuna tababaran kartaa luqada Iswiidhishka.
Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan xilli firaaqaha iyo hawlaha dhalinyarada.
"Aktiviteter i Sverige" waa jedwal kaas oo aad ka raadin kartid hawlaha kugu haboon. Waxaad tusaale ahaan ka heli kartaa ururada u dhow meesha aad degantahay ee haya hawlo ku haboon waxa aad xiisayso.
Waxaad ku qori kartaa kalmada la raadinayo ama dooran kartaa maalin ama hawlo gaar ah dhinaca arrimo gaar ah. Tusaale ahaan Isboortiga, Luqada iswiidhishka ama Dhaqanka iyo madadaalada.